” တံခါးမှူးဒတ္ထ.နှင့် ကျားမာယာ”..မှသည် “ရာဝဏ”….သို့တိုင် (သဘင်လောကရဲ့ မှတ်တိုင်များစွာ စိုက်ထူခဲ့သော ဉီးဝင်ဗိုလ် သို့တမ်းတခြင်း) – All Update News
” တံခါးမှူးဒတ္ထ.နှင့် ကျားမာယာ”..မှသည် “ရာဝဏ”….သို့တိုင် (သဘင်လောကရဲ့ မှတ်တိုင်များစွာ စိုက်ထူခဲ့သော ဉီးဝင်ဗိုလ် သို့တမ်းတခြင်း)
December 9, 2021 December 9, 2021 - by admin2 - LeaveaComment
” တံခါးမှူးဒတ္ထ.နှင့် ကျားမာယာ”..မှသည် “ရာဝဏ”….သို့တိုင် (သဘင်လောကရဲ့ မှတ် တိုင်များစွာ စိုက်ထူခဲ့သော ဉီးဝင်ဗိုလ် သို့တမ်းတခြင်း
ကျွန်တော်”ဝင်းဗိုလ်” ဇာတ်ရုံအတွင်းကကြို ဆိုပါသည်မင်္ဂလာရှိသောညမှာ*တွေ့ဆုံရတာဝမ်းသာမဆုံးပါသည်
မြန်မာ့ဇာတ်သဘင်သမိုင်းမှာလှည်းနေလှေအောင်းမြင်းဇောင်းမကျန်မသိသူမရှိတဲ့ဂန္ထဝင်ဇာတ်အဖွဲ့ကြီးတဖွဲ့ကိုပြပါဆိုရင်အရင်ဆုံး *ရွှေမန်းတင်မောင်* ဇာတ်အဖွဲ့ကြီးကိုပြေးမြင်ကြမှာမလွဲပါဘဲ
ရွှေမန်းတင်မောင်ဇာတ်အဖွဲ့ကို 1932 ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ 1969 ခုနှစ်မှာတော့ ရွှေမန်းဦးတင်မောင်ကွယ်လွန်သွားရှာပါတယ်။ ရွှေမန်းတင်မောင်ဇာတ်အဖွဲ့မှရွှေမန်းသဘင်ဇာတ်အဖွဲ့ရယ်လို့ပြောင်းလည်းမှည့်ခေါ်ပြီးခေတ်အဆက် ဆက်ကိုဖြတ် သန်းလာခဲ့တာယနေ့ထိတိုင်ပါဘဲ။
တကယ်တော့ ရွှေမန်းသဘင်ခုလို နှစ်ပေါင်းများစွာတည်တန့်နိုင်ခြင်းရဲ့အဓိကကျသောပထမဦးဆောင်သူဟာရွှေမန်းကိုဝင်းဗိုလ်ပါဘဲ။ ကိုဝင်းဗိုလ်ဟာညီငယ်များဖြစ်ကြတဲ့ကိုဆန်းဝင်း ကိုဝင်းမောင် ကိုချမ်းသာ ထိုမှတဆင့် သားများ တူများယနေ့မင်းရွှေရောင်တင် ( ပူတူး) လက်ထက်ထိ ဆန်းစစ်ကြည့်သော်ရွှေမန်းသဘင်၏သက်တန်းသည် 89 နှစ်သို့တိုင်ခဲ့ပေပြီ။
ကိုဝင်းဗိုလ်ကတော့ 11. 1. 2016.
ကိုဝင်းမောင်နဲ့ကိုချမ်းသာဟာချစ်လှစွာသောသူတို့ရဲ့အကို ..ကျေးဇူးရှင်ကိုဝင်းဗိုလ်နဲ့ပါတ်သက်သ မျှတွေကို လွမ်းရင်း မောရင်း ပြောရင်း နှမြှောရင်း..
တခါတရံကြည်နူးစွာ*…ရသစုံကိုဖွင့်ဟခဲ့ကြသည့် အတွက် ကျွန်မစာရေးသူတယောက်အနေနဲ့ရော တချိန်ကရွှေမန်းသဘင်ရဲ့မင် းသမီးဟောင်းတ ယောက်အနေနဲ့ရော ကျေ းဇူးတင်စွာဂါရဝပြုပါသည်။
ဘဝစုံရသစုံဖြတ်သန်းခဲ့သောကိုဝင်းဗိုလ် ၏ဘဝနှင့်အနုပညာများကို ရေးသားဖော် ထုတ်ရန်ကြိုးစားခြင်းအတွက် ရွှေမန်းကိုဝင်းဗိုလ်အားရိုသေစွာလက်အုပ်ချီ၍ခွင့်တောင်းပါသည်။
” တံခါးမႉးဒတၳ.ႏွင့္ က်ားမာယာ”..မွသည္ “ရာဝဏ”….သို႔တိုင္ (သဘင္ေလာကရဲ႕ မွတ္တိုင္မ်ားစြာ စိုက္ထူခဲ့ေသာ ဉီးဝင္ဗိုလ္ သို႔တမ္းတျခင္း
ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္သမိုင္းမွာလွည္းေနေလွေအာင္းျမင္းေဇာင္းမက်န္မသိသူမရွိတဲ့ဂႏၳဝင္ဇာတ္အဖြဲ႕ႀကီးတဖြဲ႕ကိုျပပါဆိုရင္အရင္ဆုံး *ေ႐ႊမန္းတင္ေမာင္* ဇာတ္အဖြဲ႕ႀကီးကိုေျပးျမင္ၾကမွာမလြဲပါဘဲ
ေ႐ႊမန္းတင္ေမာင္ဇာတ္အဖြဲ႕ကို 1932 ခုႏွစ္မွာစတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။ 1969 ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေ႐ႊမန္းဦးတင္ေမာင္ကြယ္လြန္သြားရွာပါတယ္။ ေ႐ႊမန္းတင္ေမာင္ဇာတ္အဖြဲ႕မွေ႐ႊမန္းသဘင္ဇာတ္အဖြဲ႕ရယ္လို႔ေျပာင္းလည္းမွည့္ေခၚၿပီးေခတ္အဆက္ ဆက္ကိုျဖတ္သန္းလာခဲ့တာယေန႔ထိတိုင္ပါဘဲ။
တကယ္ေတာ့ ေ႐ႊမန္းသဘင္ခုလို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္တန႔္ႏိုင္ျခင္းရဲ႕အဓိကက်ေသာပထမဦးေဆာင္သူဟာေ႐ႊမန္းကိုဝင္းဗိုလ္ပါဘဲ။ ကိုဝင္းဗိုလ္ဟာညီငယ္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ကိုဆန္းဝင္း ကိုဝင္းေမာင္ ကိုခ်မ္းသာ ထိုမွတဆင့္ သားမ်ား တူမ်ားယေန႔မင္းေ႐ႊေရာင္တင္ ( ပူတူး) လက္ထက္ထိ ဆန္းစစ္ၾကည့္ေသာ္ေ႐ႊမန္းသဘင္၏သက္တန္းသည္ 89 ႏွစ္သို႔တိုင္ခဲ့ေပၿပီ။
ကိုဝင္းဗိုလ္ကေတာ့ 11. 1. 2016.
ကိုဝင္းေမာင္နဲ႔ကိုခ်မ္းသာဟာခ်စ္လွစြာေသာသူတို႔ရဲ႕အကို ..ေက်းဇူးရွင္ကိုဝင္းဗိုလ္နဲ႔ပါတ္သက္သ မွ်ေတြကို လြမ္းရင္း ေမာရင္း ေျပာရင္း ႏွေျမႇာရင္း..
တခါတရံၾကည္ႏူးစြာ*…ရသစုံကိုဖြင့္ဟခဲ့ၾကသည့္ အတြက္ ကြၽန္မစာေရးသူတေယာက္အေနနဲ႔ေရာ တခ်ိန္ကေ႐ႊမန္းသဘင္ရဲ႕မင္းသမီးေဟာင္းတ ေယာက္အေနနဲ႔ေရာ ေက်းဇူးတင္စြာဂါရဝျပဳပါသည္။
ဘဝစုံရသစုံျဖတ္သန္းခဲ့ေသာကိုဝင္းဗိုလ္၏ဘဝႏွင့္အႏုပညာမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ထုတ္ရန္ႀကိဳးစားျခင္းအတြက္ ေ႐ႊမန္းကိုဝင္းဗိုလ္အား႐ိုေသစြာလက္အုပ္ခ်ီ၍ခြင့္ေတာင္းပါသည္။
Previous Article အမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးလဲ မြန်မြန်အေးချမ်းချင်လှပါပြီ မိသားစု စုံစုံလင်လင် နေချင်တာကြောင့် မြန်မာပြည်က အိမ်ကိုပြန်ချင်လှပြီ လို့ဆိုတဲ့ ချမ်းချမ်း
Next Article မနက်ဖြန် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းသပိတ် Silent Strike တွင် ပြည်သူအားလုံးပါဝင်ပေးကြရန် ဒေါက်တာတေဇာဆန်း တိုက်တွန်း